ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စမ်းချောင်း ရှိ ငှားရန် Apartment Rent In Sanchaung (ID-273), တိုက်ခန်း | ShweProperty.com
ငှားရန် - တိုက်ခန်း - Apartment Rent In Sanchaung (ID-273)
Apartment for rent in Sanchaung Township, near Dagon Center (2). Apartment area - 1800 sqft, organized by Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Aparment has Thee Air-conditioners and Furniture.
Asking Price - 10 Lakh (Nego)
Apartment Rent In Sanchaung (ID-273)
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဒဂုံစင်တာ - ၂ အနီးရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်းအကျယ် - ၁၈၀၀စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် နှစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လေအေးပေးစက် သုံးလုံးနှင့် ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်များ ထည့်သွင်းပါရှိပြီးဖြစ်သည်။
ငှားရမ်းခဈေးနှုန်း - ၁၀သိန်း (ညှိနှိုင်း)
စမ်းချောင်းရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်း (ID-273)
Property ID: S-1186228
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Apartment Rent In Sanchaung (ID-273)
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဗဟိုလမ်းမပေါ်ရှိငှားရန်ရှိသောနှစ်ထပ်တိုက်ခန်းကျယ်(Malihku Real Estate)
စမ်းချောင်းမြို့နယ် အောင်ချမ်းသာ5လမ်းရှိ အဆင့်မြင့် ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ တိုက်ခန်း ငှားမည်
Code-7273 စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် မြေညီထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
Code-7271 စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
Code-7296 စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် မြေညီထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
Code-7423 စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် ပထမထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
Code-7405 စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် ထပ်ခိးအပြည့်ပါ မြေညီထပ်အခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
LT1901005345: 1BR apartment for rent in Sanchaung
Code-7335 စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
APR-191, ပဒုမ္မာလမ်းတွင် အကျယ်(15x60) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-188, မြင့်မိုရ်လမ်းတွင် အကျယ်(15x55) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-178, သပြေညိုလမ်းတွင် အကျယ်(1000sqft) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-173, မကြီးကြီးလမ်းတွင် အကျယ်(1200sqft) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ စမ်းချောင်းတောင်ရပ်ကွက်၊ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှိငှားရန်ရှိ်သောတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate)
Code-7343 စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် မြေညီထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
APR-166, သီရိလမ်းတွင် အကျယ်(47x50) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-145, ဆီဆုံလမ်းတွင် အကျယ်(33x55) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-138, ဇေယျသုခလမ်းတွင် အကျယ်(12x50) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
Code-7400 စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် ပြင်ဆင်ပြီး မြေညီထပ်တိုက်ခန်းအား Foreigner သီးသန့်ငှားရန်ရှိပါသည်။
Shweproperty ID: S-1186228
Mobile 09250349021, 09974401199
Office no: 09792444317, 09773356137